Success Quotes in Nepali - Nepali Me
Nepali Quotation, Nepali Quotes (Nepali sayings)
Success Quotes in Nepali
Nepali Quotes on Success. How to be successful? Get inspired by these success quotes.
सफलताका केहि भनाइहरु
“सबै उपलब्धिहरूको सुरूवात विन्दु भनेकोनै चाहना हो ।” – Napoleon Hill
“के गर्न आवश्यक छ, त्यस बाट सुरु गर्नुस । अनि के गर्न सम्भव छ, त्यो गर्नुस । बिस्तारै तपाईंले असम्भव पनि गरिरहनु भएको हुनेछ ।” – Francis of Assisi
“तपाईले ठुलो लक्ष्य राख्नुभयो र पुरा भयोे; मलाई केहि आपत्ति हुनेछैन । तर सानो लक्ष्य राख्नुभयो र पुरा भयो; मलाई ठुलो आपत्ति हुनेछ ।” – Michelangelo
“त्यहाँ विजेताहरू छन्, त्यहाँ हार्नेहरू छन् र त्यहाँ केहि व्यक्तिहरू छन् जसले अझै पनि कसरी जित्ने भनेर सिकेका छैनन् ।” – Les Brown
“सफलता भनेको भर्याङ्ग जस्तो हो जसलाई चढ्न खल्तीमा हातहरु राखेर हुँदैन ।” – Mark Caine
“सुरुवात गर्ने उत्तम तरिका भनेको नै कुराकानी छोडी, गर्ने थाल्नु हो ।” – Walt Disney
“चन्द्रमाको लागि निसाना गर्नुहोस् र यदि तपाईंले मिस गर्नुभयो भने पनि तपाईं अझै ताराहरूको बीचमा हुनुहुनेछ ।” – Les Brown
“जीवनको जुनसुकै क्षेत्रमा भएको हाम्रो सीपले तब मात्र सफलता ल्याउँछ, जब हामीसँग सही मानसिकता हुन्छ ।” – Gaur Gopal Das
“कहिले पनि हार नमान्ने मानिसलाई हराउन गाह्रो हुन्छ ।” – Babe Ruth
“म मानिसहरूलाई सँधै सल्लाह दिन्छु – नपर्खनुहोस् ! जवान हुदैँ केहि गर्नुहोस्, जुन बेला तपाईंसँग गुमाउनको लागि केहि हुँदैन, र त्यो कुरा दिमागमा राख्नुहोस्।” – Steve Jobs
“यदि तपाई ठूला काम गर्न सक्नुहुन्न भने, साना कामहरु ठुलो तरिकाले गर्नुहोस् ।” – Napoleon Hill
“पहिले अरूले तपाईलाई वेवास्ता गर्छन्, त्यसपछि उनीहरु हाँस्छन्, त्यसपछि तिमीसंग लड्छन्, तब गएर तिमी जित्छौ।” – Mahatma Gandhi
“गोलहरू सेट गर्नु भनेको अदृश्यलाई दृश्यात्मक बनाउने पहिलो चरण हो।” – Tony Robbins
“तपाई नरोकिएसम्म, तपाई कत्ति बिस्तारै अघि बढ्नुभयो भन्ने कुराले केहि फरक पार्दैन।” – Confucius
“चिहानको सबैभन्दा धनी मानिस हुनुमा मलाई मतलब छैन। तर राती सुत्नु भन्दा अगाडी यस्तो सोच आवोस कि हामीले केही अचम्मको काम गर्यौं…..। हो यो कुरा मलाई मतलब छ।” – Steve Jobs
“एक मिनेट ढिलो हुनु भन्दा एक घण्टा चाँडै हुनु राम्रो हो ।” – Rick Rigsby
“जीवनको अनुभव, हामी केमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्छौं त्यसमा निर्भर गर्दछ। हामीले आफ्नो ध्यान परिवर्तन गर्‍यौं भने हामीले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न सक्छौं। ” – Gaur Gopal Das
“उत्कृष्टता दुर्घटना द्वारा हुँदैन। यो एक प्रक्रिया हो।” – A.P.J Abdul Kalam
“कहिलेकाँही, यी साना निर्णयहरुनै हुन् जसले तपाईंको जीवनलाई सँधैको लागि बदल्न सक्छ ।” – Keri Russell
“तपाईंले हार मान्नु हुँदैन र हामीले समस्यालाई हामीलाई हराउन अनुमति दिनु हुँदैन।” – A.P.J Abdul Kalam
“यदि मान्छेहरु तपाई कति टाढा पुग्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा शंका गरिरहेका छन् भने तपाई यती टाढा पुग्नुहोस कि तपाई तिनीहरुलाई अबबाट सुन्न नसकोस् ।” – Michele Ruiz
“आफ्नो पहिलो विजय पछि विश्राम नगर्नुहोस् किनकि यदि तपाईं दोस्रोमा असफल हुनुभयो भने, अधिक ओठहरू पर्खिरहेका छन् भन्नलाई कि तपाईंको पहिलो जीत मात्र भाग्य थियो।” – A.P.J Abdul Kalam
“विजेताहरू ती हुँदैनन् जो कहिल्यै असफल हुँदैनन् तर तिनीहरू हुन्छन जसले कहिले पनि हार मान्दैनन् ।” – A.P.J Abdul Kalam
“भगवानले हामीलाई सफल भएको भन्दा पनि प्रयास गरेको हेर्न चाहनुहुन्छ ।” – Mother Teresa
“मैले गरेको सबै भन्दा सजिलो काम भनेको एक मिलियन डलर कमाउनु थियो र मैले गरेको सबै भन्दा गाह्रो काम, र यसलाई वर्षौं लागेको थियो, विश्वास गर्न कि म एक मिलियन डलर कमाउन सक्षम छु ।” – Les Brown
“जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता सही समयमा मात्र आउँछ । तपाईं यसलाई चांडो पाउन सक्नुहुन्न। हतार नगर्नुहोस्। केवल धैर्यपूर्वक सहि कुरा गरिरहनुहोस्। हरेक साँचो प्रयासको बीउले एक दिन फल फलाउनेछ ।” – Gaur Gopal Das
“जब हाम्रो हस्ताक्षर अटोग्राफमा परिवर्तन हुन्छ; यसले सफलतालाई अंकित गर्दछ।” – A.P.J Abdul Kalam
“यदि तपाईं वास्तवमै कति धनी हुनुहुन्छ भनेर जान्न चाहानुहुन्छ भने, एक थोपा आँसु झार्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि कति हातहरु त्यो आँसु पुछ्न आउंछन्।” – Gaur Gopal Das
“मलाई लाग्छ हामी सबैले अहंकार बाट जोगिनु आवश्यक छ किनकी जब तपाईं सफल बन्नुहुन्छ, यसले तपाईको ढोका ढकढक्याउँछ ।” – Steve Jobs
“तपाईको सपनाहरु साकार हुनु भन्दा पहिले तपाईले सपना देख्नु पर्छ।” – A.P.J Abdul Kalam
“मानिसको जीवनमा कठिनाइहरू हुनु आवश्यक छ किनकि ति चिजहरु सफलताको आनन्द लिन आवश्यक छन्।” – A.P.J Abdul Kalam
“यदि चीजहरू तपाईंको लागि सही भइरहेको छैन भने एकछिन बिश्राम गर्नुहोस्। तपाईंको जीवनलाई विचार गर्नुहोस्। तपाईंको यात्रालाई पुनः परिभाषित गर्नुहोस्। र दोब्बर बलका साथ् पुन: सुरुवात गर्नुहोस् ।” – Gaur Gopal Das
“तपाईको लक्ष्यमा सफल हुनको लागि तपाईले आफ्नो लक्ष्यमा एकल दिमाग भक्ति गर्नुपर्दछ।” – A.P.J Abdul Kalam
“कडा परिश्रमको कुनै विकल्प छैन ।” – Thomas Edison
“व्यवसायमा ठुलो चीजहरू एक व्यक्ति द्वारा कहिल्यै हुदैँन । ती कुराहरु मात्र व्यक्तिहरूको टोलीबाट हुन्छ।”
“यदि तपाईं गरीब जन्मनुभयो भने यो तपाईंको गल्ती होइन, तर यदि तपाईं गरीब मर्नुभयो भने यो तपाईंको गल्ती हो।” – Bill Gates
“सफलताको कुनै रहस्य छैन। यो त तयारी, कडा परिश्रम र असफलताबाट सिक्ने परिणाम हो।” – Colin Powell
“तपाइँ आफ्नो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नमा केन्द्रित हुनको लागि प्रत्येक दिन दुई पटक समीक्षा गर्नुहोस् ।” – Les Brown
“यदि तपाईंले आफ्नो जीवनको योजना आफै बनाउनु भएन भने, सम्भावना यो रहन्छ कि तपाईं अरु कसैको योजनामा पर्नुहुनेछ र अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि उनीहरुले तपाईंको लागि पक्कै पनि पर्याप्त योजना बनाएका हुँनन् ।” – Jim Rohn
“अरूलाई उनीहरूको सपना पुरा गर्न मद्दत गर्नुहोस् र तपाईंले आफ्नो सपना पुरा गर्नुहुनेछ ।” – Les Brown
“सफलता एक पागल शिक्षक हो। यसले स्मार्ट मानिसहरूलाई उनीहरू हार्न सक्दैन भन्ने भ्रम पार्दछ।” – Bill Gates
“तपाईले सफलताबाट भन्दा पनि बढि असफलताबाट सिक्नुहुन्छ । तपाई नरोकिनुस् । असफलताले तपाईको चरित्र बनाउँछ ।” – Unknown
“मेलै आफ्नो क्यारियरमा ९००० भन्दा बढी शटहरु विगारेको छु । मेलै लगभग ३०० खेलहरु हारेको छु । २६ चोटि मलाई खेल जित्ने शट हान्न विश्वास गरेको थियो र मैले गुमाएको छु । म आफ्नो जीवनमा बारम्बार असफल भएको छु र त्यसैले म सफल छु ।” – Michael Jordan
“तपाईंको जीत हुनेछ यदि तपाईंले हार मान्नुभएन भने।”- Les Brown
“कहिलेकाँही तपाई जित्नुहुन्छ, कहिलेकाँही तपाई सिक्नुहुन्छ, त्याँहा असफलता नामको कुनै शब्द छैन ।” – Unknown
“यदि तपाईं असफल हुनुभयो भने पनि कहिले हार नमान्नुहोस् किनभने असफलको अर्थनै “शिक्षामा पहिलो प्रयास” हो।” – A.P.J Abdul Kalam
“कुनै सफलताको लागि यसरी काम गर्नुहोस् कि मानौ त्यो सफलता तपाईबाट खोस्नको लागि अरु मनिसहरु दिनको चौबिसै घण्टा काम गरिरहेका छन् ।” – Mark Cuban
“शक्ति शारीरिक क्षमताबाट आउँदैन। यो एक अदम्य इच्छाबाट आउँछ।” – Mahatma Gandhi
“जब जिवनमा भएको सबै कुरा तपाईको विरुद्ध गइरहेको देखिन्छ, याद गर्नुहोस्; हवाइजहाज उड्ने जहिले पनि हावाको विरुद्ध हो, सँगै होइन ।” – Henry Ford
“यदि तपाईं सूर्य जस्तो चम्किन चाहानुहुन्छ भने, सूर्यको जस्तो पहिले जल्नुहोस्।” – A.P.J Abdul Kalam
“गर्नुस के गर्न सजिलो छ र तपाईंको जीवन कठिन हुनेछ । गर्नुस के गर्न गार्हो छ र तपाईंको जीवन सजिलो हुनेछ ।” – Les Brown
“सबैभन्दा ठूलो बदलानै ठूलो सफलता हो।” -Les Brown
“सफलताको उत्सव मनाउन ठीक छ तर असफलताको पाठलाई ध्यान दिनु अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ।” – Bill Gates
“सफलताको मानिस बन्ने प्रयास नगर्नुहोस्, बरु मूल्यवान् मानिस बन्ने प्रयास गर्नुहोस्।” – Albert Einstein
“कहिलेकाँही जब तपाईं नया खोजी गर्नुहुन्छ, तपाईं गल्ती गर्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई छिटो स्वीकार गर्न उत्तम छ, र तपाईंको अन्य आविष्कारहरू सुधार गर्दै अगाडी बढ्नुहोस।” – Steve Jobs
“यदि तपाई त्यस्तो व्यक्ति खोजी गरिरहनु भएको छ, जसले तपाईको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ; एकचोटी ऐनामा गएर हेर्नुहोस् ।” – Sandeep Maheshwari
“यस्तो जीवन बिताउनुहोस् कि जसले तपाईंलाई चिन्छ, तपाईंलाई चिनेको छ भनेर उसलाई गर्व होस्। ” – Gaur Gopal Das
“निराशावादिले सबै अवसरहरुमा कठिनाई देख्दछ। आशावादीले हरेक कठिनाई मा अवसर देख्दछ ।” – Winston Churchill
“यदि मेरो सफल हुने संकल्प पर्याप्त बलियो छ भने असफलताले मलाई कहिले उछिन्न सक्दैन ।” – A.P.J Abdul Kalam
“ठूला चीजहरु सम्पन्न गर्न; हामीले कार्य सुरु गरेर मात्र हुँदैन, सपना पनि देख्नु पर्छ, योजना बनाएर मात्र हुँदैन, विश्वास पनि गनुपर्छ ।” – Anatole France
“सम्पन्न नभएसम्म, सँधै असम्भव देखिन्छ ।” – Nelson Mandela
“महान दिमागले विचारहरु छलफल गर्छन, औसत दिमागले घटनाहरु छलफल गर्छन र सानो दिमागले मानिसहरु छलफल गर्छन ।” – Eleanor Roosevelt
“शान्तिमय जीवनका लागि दुई नियम: असफलताको निराशा कहिले पनि हृदयमा जानु हुँदैन, र सफलतामा अहंकार कहिल्यै दिमागमा जानु हुँदैन।” – A.P.J Abdul Kalam
“म असफल भएको छैन । मैले त त्यस्तो १०,००० तरिकाहरु पत्ता लगाए जसले काम गर्दैन ।” – Thomas Edison
“म हावाको दिशा परिवर्तन गर्न सक्दिन, तर म आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सधैं पाल मिलाउन सक्छु।” – Jimmy Dean
“जब कुनै काम निकै महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यो तपाईंको पक्षमा नभएपनि, तपाईंले त्यो काम जसरी पनि गर्नुहुन्छ ।” – Elon Musk
“मलाई सहि हुने बारे मतलब छैन। म सफलताको बारेमा ख्याल राख्छु र सही कुरा गर्दछु।” – Steve Jobs
“सफलतामा हैन प्रक्रियामा ध्यान दिनुहोस् ।” – Unknown